मनोरञ्जन – Page5– MeroJilla.com
सवै छोरी माईतीको शरण मैलिक तिज एलबम बोकेर आए राजन कार्की र राजेन्द्र ढकाल Thursday, July 19th, 2018
पोखरा । नेपाली महिला दिदिबहिनीहरुको माहन् चहाडको रुपमा रहेको हरितालिका तिजको अवसर पारेर चर्चित लोक कलाकार राजन कार्की र संचारकर्मी राजेन्द्र ढकाले माईतीको शरण सार्वजनिक गरेका छन् । आशिस म्युजिकको प्रस्तुतीमा माइतीको शरण रहेको छ ।पछिल्लो समयका चचिर्त कलाकार राजन कार्की र लक्ष्मी बरालले यो एलबममा स्वर भरेका छन् ।भने, लामो समयसम्म संचारकर्मी बनेका राजेन्द्र ढकालका शब्द..
पर्वत - संगै बसिरहेको मायालु जोडी छुट्टीन मन त कस्लाई पो लाग्छ र ? तर जब छुट्टीनै पर्छ अनि काममा दिलै नबस्ने रहेछ । घरमा बसेर नपुग्ने भएपछि रेल चढेर दिल्ली वा मुम्बई जानुपर्ने नेपालीको बाध्यता छ । यही भावलाई टपक्कै टिपेर लोकदोहरी गायक सूदीप क्षेत्रीले गीति एलबम रेलको टिकटको म्यूजिक भिडियो बजारमा ल्याएका छन । डिजिटल स्टार पोखराले सार्वजनिक गरेको उक्त म्यूजिक भिडियोमा राजेश..
भब्य रुपमा सगरमाथा म्युजिक अवार्ड २०७५ हुँदै Wednesday, July 18th, 2018
काठमाडौं । रेस्पोन्सिभ मिडिया प्रालिको आयोजनामा हुन लागेको ‘सगरमाथा म्युजिक अवार्ड २०७५’ मा नेपाली कलाकर्मीहरुले सक्रिय रुपमा आफ्नो सहभागिता जनाइरहेको आयोजक संस्थाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । आवेदन फारम असार १ गतेबाट खुल्ला भएको र आगामी साउन ३१ गतेसम्म आवेदन फारम भरिसक्नु पर्ने संस्थाका अध्यक्ष मनोज थापाले जानकारी दिए । अवार्ड आगामी असोजमा हुनेछ । जुरी र भोटको..
अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराजको ‘इन्गेजमेन्ट’ त भयो, अब विवाह कहिले ? Monday, July 16th, 2018
काठमाडौं । नेपाली फिल्मकी अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज प्रेममा थिए । जसलाई आधिकारिता दिएका छन्, इन्गेजमेन्ट गरेर । पछिल्लो पुस्ता विशेषगरी कलाकारहरु ‘लिभ इन टुगेदर’मै बढी रमाउन चाहन्छन् । तर, ‘फेमिलियर’ प्रेम रोमान्समा रहेका प्रियंका र देशराजले औंठी साटेर समाज र आफ्ना सहकर्मीलाई ‘हामी अर्जिनल जोडी’ भन्ने देखाएका छन् । शनिबार यी चर्चित..
परिवारको पूर्णसाथ नभएको भए म कलाकार बन्ने थिइन होला,स्वर्गीय बाबा प्रति नमन–अमृत क्षेत्री Tuesday, June 26th, 2018
प्रदेश ४ । नेपाली पप देखि सुगम क्षेत्रमा ब्यस्त रहेको गायक हुन पर्वतको बाच्छाका अमृत क्षेत्री । उनले बिगत दशैंक देखि नेपाली पप देखि सुगम क्षेत्रमा ठूलो योग्दान गरेका छन् । काठमाडौमा उनले सुरशाल म्युजिक एकेडेमी सञ्चालन पनि गरेका छन् । जहाँ नयाँ संगित र कलाकारकारको जन्म हुन्छ । उनले बालप्रतिभालाई आम दर्शक श्रोता माझ प¥याउन निकै ठूलो योग्दान गरेका छन् ।र् मैले हर्ने एउटा..
शिल्पा स्टारर फिल्म ‘वीराङ्गना’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो) Tuesday, June 19th, 2018
काठमाडौं । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल स्टारर फिल्म ‘वीराङ्गना’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । साइराम पिक्चर्सको युट्युब च्यानलबाट निर्माण पक्षले फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो । फिल्ममा शिल्पा पोखरेल, अनुम विक्रम शाही, पृथ्वीराज प्रसाई, प्रज्वल गिरी, शुशिल पोखरेल, ध्रुव कोइराला, प्रिया रिजाल लगायतको अभिनय देख्न पाइन्छ । फिल्ममा घोडा र बाँदरको पनि फिचरिङ रहेको छ । फिल्म..
‘पृथ्बी’ Monday, June 4th, 2018
सुगम संगीतमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएका अतिनै मिठो स्वरका धनि गायक प्रमोद खरेल,जो भर्खरै मात्र द भ्वाईस अफ नेपालको कोचका रुपमा पनि नियुक्ति भएका छन्। उनै सुगम स्वरका धनि खरेलको ‘पृथ्बी’ बोलको नया गीत एक कार्यक्रम बिच सुक्रबार सार्बजनिक गरिएको छ । उक्त गीतको भिडियोलाई खरेलको आफनै युटुब च्यानल मार्फत् सार्बजनिक गरिएको हो।गीतमा शब्द संगीत र स्वर प्रमोद खरेलको नै रहेको..
युट्युब च्यानलमा कलाकार मुना कार्कीको टक सो Saturday, June 2nd, 2018
काठमाडौं । चलचित्र निर्देशक कमल एक्चै मगर र कलाकार तथा मोडल मुना कार्कीले सामाजिक सञ्जाल युट्युबमार्फत ‘प्याक सो विथ टु’ नामक एक नयाँ कार्यक्रम लिएर आएका छन् । पर्फ्र्मिङ आर्ट क्रिएसनको प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम जेठ १८, शुक्रबारदेखि युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । कलाकार तथा मोडल मुना कार्कीले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रमलाई चलचित्र निर्देशक कमल एक्चै मगरले..
‘ लम्फू ’दर्शक तान्दैं Thursday, May 31st, 2018
पर्वत । नेपाली चलचित्र लम्फू ले दर्शक तान्दै गरेको पत्रकार सम्मलन मार्फत बिहिबार जानकारी गराईएको छ । चलचित्र लम्फू अहिले प्रर्दशनको क्रम्ममा छ । चलचित्रका निर्देशक गोपालचन्द्र लामिछाने मिडियाको सकरात्मक सहयोग रहेको बताएका छन् । गत हप्ता गरिएको ‘च्यारेटी सो ’ मा चलचित्रलाई यहाँका दर्शकले राम्रो प्रतिकृया दिएको उनले बताए । उनले भने,‘आफ्नौ स्थानीय क्षेत्र भएर पनि होला..
सुरशाला आइडल जुनियरका बिजेता उमेरले १० बर्षका आयुषको स्वरले आमालाई रुवायो । भिडियो Wednesday, May 30th, 2018
पोखरा । लपर्वतका कलाकार अमृत क्षेत्रीले विभिन्न निकायको सहकार्यका सुरु गरेको सुरशाला आईडलका बिजेता आयुष के सीको गायनले उनकी आमाको आँखावाट आसु झारेका छन् । उनका संगितका शिक्षक अमृत क्षेत्रीले भने,उनको गायन क्षमता साँचै कलात्मक छ । उनी सानो उमेरमा संगितकामा लागुन नै एउटा राम्रो पक्ष हो । थप जान्न भिडियो हेरौं..